UStephen Harper, uNdunankulu waseKhanada: I-Biography
I-Biography kaStephen Harper, uNdunankulu waseKhanada Ukususela ngo-2006
UNdunankulu uStephen Harper uye wasebenza ngeqela elixhasayo kwiCanada, kwaye njengeNkokheli yeCanada yeZiko laseCanada lijongene nokuhlanganisana kwayo kunye ne-Progressive Conservatives yokwenza iqela elitsha leConservative yeCanada ngo-2003. umxhasi wezopolitiko, uStephen Harper uye wancinci ngakumbi kwiinkokeli. Wagijima kwiphulo elikhethekileyo kwi-electoral election ka-2006 waza waqhuba ii-Conservatives kwi- rhu lumente .
Ngo- 2008 ukhetho lwamazwe , lwandise ubungakanani baloo ncinane.
UStephen Harper waqhubeka engaphelelwa ngumonde kunye neengxaki ezenziwa ngabarhulumente abancinci kwizicwangciso zakhe. Usoloko ephethe umphathi oqinileyo, waba nokulawula okungakumbi, bobabini kunye namaPhalamende kunye nenkonzo yoluntu, wayeya kuba nobudlova ekuhlaseleni inkcaso kunokwakhiwa kwesivumelwano, kwaye akazange amthobele ipalamente, echaza ngokuthi "imidlalo yezopolitiko nje."
Ngo-2011 unyulo lwama-federal, uqhube umkhankaso wekrogram esekelwe ukwesaba, unike inkulumo efanayo kwimizuzu emini kulo lonke uphulo, kwaye uthatha imibuzo embalwa. Isicwangciso sisebenze kwaye wawunqoba urhulumente uninzi . Urhulumente wakhe ushiywe ebuncinci kwiQuebec. Kwakhona ubhekane ne-NDP esanda kuxhotyiswa kwi- Opposition Opposition , enamaqela amaninzi amatsha namaPalamente. Emva nje kokhetho, uStephen Harper uxelele abalandeli bakhe isicwangciso sakhe sokwenza ii-Conservatives urhulumente oqhelekileyo, esilawula kufuphi neziko.
2006 ukuya ku-2015
Ngo-Apreli 30, 1959, eToronto, e-Ontario
MA - Yunivesithi yaseCalgary 1991
UMongameli, iNational Citizens Coalition 1998
IQembu leNguqulelo yeKhanada (ngo-1988 ukuya ku-2000)
IQumrhu lamaZiko aseCanada (2000 ukuya ku-2003)
Iqela leConservative yeCanada (2003 ukuza)
I-Calgary West (1993 ukuya ku-1997 - iNguqulelo yeQumrhu)
I-Calgary kumzantsi-mpahla (2002-04 - IQumrhu lamaZiko aseCanada; 2004 ukuza kwi-Party Conservative yeKhanada)
Umsebenzi wezobupolitika kaStephen Harper
UStephen Harper waqala umsebenzi wakhe wezopolitiko njengoNcedisi oyiNtloko kuJim Hawkes, iPhalamende eliQhubekayo loLondolozo lweCalgary West ngo-1981.
Waba nguGosa oyiNtloko wePolisi kwiQumrhu loLungiso ngo-1987.
Waba ngumNcedisi woMthetho kuDeborah Grey, iPalamente yokuqala ye-Reform Party ngo-1988.
UStephen Harper wayekhethwa kuqala kwiNdlu yeeMinon njengoMmeli woLungiso kwiCalgary West ngo-1993.
Wayekhonza njengomgxeki weQembu loLungiso kwiimali kunye nobumbano kazwelonke.
UStephen Harper akazange afune ukunyulwa kwakhona ngo-1997.
Ngo-Matshi 2002, uStephen Harper ukhethwa njengeNkokheli yeCanada yamaQumrhu e-Canada.
Wanyulwa kwiNdlu yeeNgingqi kwiCalgary kumzantsi weeMeyi ngo-Meyi 2002.
Emva kokuxoxisana nge-on-and-off, uStephen Harper wasayina isivumelwano kunye noPetrick MacKay weQela leNgcaciso loMgaqo-nkqubo wokudibanisa iCanada Alliance kunye neQela eliQhubekayo loLondolozo lweNkcazo kwiConservative Party yaseKhanada ngoDisemba 2003.
UStephen Harper wehla njengeNkokheli ye-Canada Alliance ukuba isebenzele inkokheli yeConservative Party yaseCanada ngoJanuwari 2004.
UStephen Harper wakhethwa iNkokheli yeConservative Party yaseCanada ngo-Matshi 2004.
Ngoonyulo luka-2006 jikelele, uStephen Harper wahombisa iqela le-Conservative ukuba liphumelele kunye noorhulumente ombalwa.
UStephen Harper ufungelwe ngo-22 uNdunankulu waseCanada ngoFebruwari 6, 2006.
UStephen Harper wahokela iQumrhu le-Conservative ukuya kurhulumente we sibini ngo-Oktobha 2008.
Ngo-Meyi 2, 2011, uStephen Harper kunye neConservative Party bawuninzi urhulumente.
Kutheni Abantu Abangenacala Benza Ubuxoki?
Isiqalo sePiano esikwi-Key Keys
I-Plesiosaur kunye nePliosaur Imifanekiso kunye neeprofayili
Iimifanekiso ezigqwesileyo zebhokisi zexesha lonke
I-NASA kunye nokubuyela kwi-Human Spaceflight
Iifayile ze-Delphi zamahhala